Caadooyinka ugu caansan uguna faafida badan | Ragga Stylish
Caadooyinka lagu hayo
Xiritaanku wuxuu ahaa kahor iyo kadibba nolosha dad badan. Dabcan, ma jiraan wax caadi ah oo ku saabsan. Waxay ku saabsan tahay isbadal ku yimaada qaab nololeedka iyo fahamka waaqica saameeya dalkeena iyo aduunkoo dhan. Fiditaanka cudurada coronavirus awgood, waxaan ku qasbanaanay inaan laqabsano nolosha guriga. Si tan loo sameeyo, waxaan soo saarnay qaar caadooyinka ku xirnaanta taasi waxay naga dhigtay inaan xoogaa raaxo ku noolaano. Maadaama xadidan ay tahay wax aan caadi ahayn, waxay mudan tahay in laga hadlo qaar ka mid ah caadooyinka aan soo saarnay muddadan oo dhan.
Sidaa darteed, waxaannu u hibeyn doonnaa qodobkan si aan kaaga warranno caadooyinka ugu badan ee lagu hayo dadka oo dhan.
1 Wicitaanada fiidiyowgu waa ballamo
2 Kalidaa ahaanshaha sida mid ka mid ah caadooyinka xayiraadda
3 Baro sida wax loo kariyo oo naftaada u raaxee
4 Samee jimicsi ka badan sidii hore
Wicitaanada fiidiyowgu waa ballamo
Haddii wax la tebay markii lagugu qasbo inaad guriga ku xirto, waa asxaabta iyo qoyska. Thanks to tiknoolajiyada aan maanta haysano, waxaan si joogto ah ula xiriiri karnaa markasta. Intaa waxaa dheer, wicitaanada fiidiyowga ayaa leh faa'iidada taas waxaad arki kartaa qofka kale waxayna siinaysaa dareenka ah inaad iyaga la joogto.
Waa run inay muhiimad weyn laheyd in la helo caadooyin ku xirnaan oo naga caawiya inaan ilaalino caafimaadka isla markaana na siiya raaxo si aan u ilaashano caafimaadkeena iyo xitaa inaan u hagaajino Waxay ahayd muhiim in la dhiirrigeliyo isku xirnaanta bulshada, in si sax ah wax loo cuno, la xoojiyo qaababka hurdada keena oo leh waxoogaa jadwal ah oo u adeega ilaalinta nidaamka.
Inta udhaxeysa codsiyada inta badan loo isticmaalo wicitaanada fiidiyowga ayaa ahaa Zoom. Waana inay tahay xilliyada xiritaanka xiriirka qofka kale inuu muhiim yahay maadaama ay u baahan tahay taageero iyo taageero shucuur. Mid ka mid ah khaladaadka la sameeyay intii lagu jiray xabsiga ayaa isticmaala isticmaalka fariimaha deg dega ah oo aad u badan. Waana wax iska fudud in lala xiriiro tikniyoolajiyadda maanta jirta. Si kastaba ha noqotee, markaan qof kula hadlayno barnaamijyo ay ka mid yihiin WhatsApp, waxaan ogaanay in mid walba uu iska shaandheeyo naftiisa sida uu dareemayo xilligaas. Laakiin ma aragno qofka kale calaamadaha isgaarsiinta ee aan hadalka aheyn. Sidaa darteed, is faham la’aan ayaa la abuuri karaa oo aan shaqsi ahaan ku xallin karin maadaama aanan ka bixi karin guriga.
Sidaa darteed, waxaa la doorbidey in lagu sii wada xiriiro fiidiyowyo leh codad meesha aan ku qadarin karno codka iyo tilmaamaba.
Kalidaa ahaanshaha sida mid ka mid ah caadooyinka xayiraadda
Waa inaan maanka ku haynaa in kastoo aan nahay bulsho, waxaan sidoo kale u baahanahay kelinimadeena. Dhammaan dadkaas ka soo gudbay meel cidla ah, uma baahna inay ka walwalaan dhinacan. Laakiin waxaa jira dad kale oo soo maray xabsi sida lamaane, qoys ama wada deggane. Waa markaa meesha ay tahay in qof kasta uu diiradda saaro sidii uu waqti ugu heli lahaa naftiisa. Magac ahaan, Waa kalinimo aan ku xulaneyno si iskood ah.
Waxaan nahay dad bulsheed oo ubaahan cilaaqaadyo dadka si joogto ah ama kayarba. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale u baahanahay waqti aan kaga fogaanno nolosheena gaarka ah iyo fikirkeena. Qofka aan aqoon sida loola noolaado naftiisa ma awoodo inuu la joogo qof kale. Sababtaas awgeed, waa muhiim in waqti loo qoondeeyo waxqabadyada keligood iyo in lagu qanco baahiyaha shaqsiyeed. Mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee xadhigan la xiriira hawlaha shaqsiyeed waa taas Iibinta ragga siigaysanaya ayaa koray. Kuwani waa siigaysiga ragga ugu fiican, iibiyaasha ugufiican inta lagu jiro xabsiyada. Hawl kasta waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed, laakiin waxay ka imaan karaan akhriska, karinta, raaxada nafta iyo si fudud oo aan waxba loo qaban.
Baro sida wax loo kariyo oo naftaada u raaxee
Waxa jira dad badan oo ka dooday labada daraf u dhexeeya: dhinac dhinac noqo mid wax soo saar badan awood u yeelan la'aanta munaasabad kale oo leh waqti aad u fara badan. Dhanka kale, ku raaxeysta inaad waxba qaban weydo maxaa yeelay waligeen ma awoodi doonno inaan helno munaasabad kale oo leh waqti badan oo firaaqo ah. Taas macnaheedu waxa weeye in qaar badani naftooda u hibeeyeen jikada si ay u bartaan sida loo kariyo cuntada loona daweeyo nafsadooda caafimaad ahaan in ka badan ama ka yar.
Maaddaama caadooyin kala duwan oo maxaabiis ah la abuuray oo sababa walwal, dad badan ayaa kordhiyay rabitaanka ah inay sameeyaan xulashooyin aan caafimaad qabin markay tahay cunista. Xulashooyinkaan waxaa ka mid ah cuntooyin badan oo warshadaysan iyo cunto dhakhso leh. Cuntadan waxaa laga dhigay mid la dhadhansan karo maadaama ay leeyihiin cufnaan tamar sare leh iyo dufan iyo sonkor badan. Isticmaalkiisa guud ahaan laguma talinayo, in kastoo haa waanu isku raaxeysan karnaa mar uun.
Haddii ay tahay su’aal ah in la qaboojiyo damacyada cunnada fudud, waxaa jira waxyaabo badan oo beddelka u leh jirka. Tusaale ahaan, waxaan helnaa lowska iyo iniinyaha oo ah xulasho aad u fiican illaa inta ay dabiici yihiin ama la shiilay. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato dhammaan kuwa shiilan, macaan iyo cusbada.
Samee jimicsi ka badan sidii hore
Waxyaabaha ka buuxsamay shabakadaha bulshada sida ugubnimada ayaa ah in qof walba uu noqday ciyaartoy caan ah. Markii aad banaanka u bixi laheyd, ma aanan arag dad badan oo jimicsi sameynaya. Si kastaba ha noqotee, xadhig ayaa yimaada waxayna naga dhigayaan inaan guriga joogno iyo dadka oo dhami waxay caadaysteen jimicsiga. Fiidiyowyo toos ah, barnaamijyo tababar ah, xitaa tababar u dhexeeya dad gooni ah dhulkooda. Wax walba way aragtay.
Waa run in nasasho la qaato oo in yar laga nasto wax walba waa fikrad fiican. Laakiin waa in sidoo kale la ogaadaa in jimicsigu yahay aalad si cadaalad ah waxtar ugu leh isku xirnaanshaha nafteena. Waana taas jimicsiga jirku wuxuu kaa caawin karaa yareynta walwalka, walbahaarka, iyo firfircoonaanta jirka guri ku ahaanshaha. Meelaha yar yar, ee xiran waxay u muuqdaan inay abuurayaan culeys ka badan kuwa furan. Sidaa darteed, dadkaas oo lahaa dabaq weyn oo ay ku jimicsadaan ayaa si fiican loo xaddiday.
In kasta oo sida wax walba la jecel yahay, haddana waa in lagu sameeyaa si dhexdhexaad ah iyo heer qof kastaa ku guuleysan karo. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad joogtayso caadadaada, caadooyinka xadhiga ayaa kaa caawin kara inaad fududayso markasta. Laakiin ha dareemin in lagugu qasbay jimicsi ama tababar kasta oo aanan jeclayn.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxyaabaha ku saabsan xabsiyada oo naga dhigay inaan waqtiga xoogaa dhaqso ku dhaafno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Caadooyinka lagu hayo
Sida loo galo gabar
Sida kor loogu qaado isku-kalsoonaanta